တောင်ယာဆင်းချိန် | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Photography » တောင်ယာဆင်းချိန်	17
Posted by thihayarzar on Jul 11, 2012 in Photography | 17 comments
ပဲခင်းနှင့်တောင်တန်း ရှုခင်း ( ၁ )သံတော်မြတ်တောင်အရှေ့ဘက် ရှုခင်း ( ၂ )၀ါစေ့ချနေသော လယ်တောသူ ( ၃ )လယ်ကွင်းများနှင့် ရှုခင်းလယ်စောင့်တဲလေးလယ်ထွန်နေသော လယ်သမားကြီးသံတော်မြတ်တောင် ကို ပဲခင်းကြားထဲကနေ ရိုက်ထားတာရှုခင်း
ညကမိုးရွာတော့ နံနက်ခင်း တောင်သူလယ်သမားတွေ လယ်ထဲဆင်းနေတဲ့အချိန် ရိုက်ထားသောပုံလေးတွေပါ .. ရွာထဲက ဓာက်ပုံဆရာကြီးတွေကို အားကျလို့ပါ ..၀ါသနာရှင်လေးပါ ကင်မရာကောင်းကောင်း မသုံးတက်သေးပါဘူး … About thihayarzar
mamanoyar says: အရမ်းကို မိုက်တယ်
ပိုပြီး သဘောကျတယ် ရွာကိုတောင် သတိရမိတယ်
နှင်းဆီ ငုံ says: အိမ်ကိုတောင် လွမ်းလာပြီ ၊ ခုချိန်ဆို အိမ်ကစပါးခင်းတွေ မြကမ္ဗလာခင်းထားသလို စိမ်းနေရော့မယ်၊ ခုလိုပုံလေးတွေ ကြည့်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် …
နွေဦး says: စိတ်ထင်လို့…..
မမ အညာသူ says: အဲလိုသဘာဝပုံလေးတွေကိုညာကအရမ်းနှစ်သက်ပါတယ်
မောင်ပေ says: ကျေးလက်ဘဝ
နေ့ စဉ် ရုံးကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့
အမော တွေ ပြေသွားသလိုပါဘဲ ။
အရင့်ရောင် says: မိုးဦးကျလို့
snow white says: စနိုးတကယ် ကိုအဲ့နေရာတွေ ကိုပုံကြည့်ရုံတင်မက ဘူး တကယ်ပါသွားချင်တယ် ဘယ်လိုမျိုး စိုက်လည်းဆိုတာလည်းစိတ်ဝင်စားတယ် သိချင်တယ်။။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဒါကျောက်ဆည်နားကရှုခင်းတွေထင်ပါ့
တောသားလေး says: သာယာလိုက်တဲ့ပုံလေးတွေ ရွာကိုပြန်ရောက်သွားသလိုခံစားရတယ် ကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျာ……
thihayarzar says: ကိုအရင့်ရောင်ရေ ကဗျာလေး ကြိုက်လို့ ကူထားလိုက်တယ်နော် …. ကျွန်တော်က ကျေးလက်သဘာဝ ကို ကြိုက်တယ်ဗျာ … လေးပေါက် ရေလာမယ်ဆိုရင် အချိန်ကောင်းပဲ နောက်တစ်ပက်ဆို ကွင်းပြင်တစ်ခုလုံး စိမ်းစိုနေတော့မှာ လေးပေါက်အားရင် လာသာနှက်လိုက်တော့ ….. လေးပေါက်ဆီက ပညာယူရတာပေါ့ ..ရွာထဲက ဓာက်ပုံဆရာကြီးတွေ ကျွန်တော်ပုံများကို ကြည့်ပြီး ဝေဖန်ပေးပါဦး … လိုအပ်သည်များကို လည်း ညွှန်ကြားပေးပါ …. ၀ါသနာပါလို့ သာ ရိုက်ထားတာ မလွယ်ဘူးဗျာ ….. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 828
ကြောင်လေး says: ပညာရှင်ရွာသားကြီးများကို Comments By Post ထဲမှာကိုသွားပြီးဖိတ်ခေါ်လိုက်ပုံလေးကြိုက်သွားပြီဗျို့။
ဓါတ်ပုံလေးတွေအားလုံးမျက်စေ့အေးစရာ ရင်အေးစရာတွေပါပဲ။ကြည့်ရတာနဲနဲမှုန်နေတာပဲသိတယ်။ ကျန်တာတော့ဘာမှသိဝူး။
Ma Ei says: ရှုခင်းလေးတွေ လှပါတယ်…
thihayarzar says: ကျောက်ဆည်မြို့နယ် အရှေ့ဘက်က ဆင်မင်းဘိလပ်မြေစက်ရုံနားလေးမှာပါ …. ကိုယ်တိုင် မျက်စိနဲ့ ကြည့်ချင်မြင်ချင်သပ ဆိုရင်လည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ …
MaMa says: ပိုစ့်လေးကို သဘောကျတယ်။
ပြောစရာလည်း မရှိတော့ လက်မထောင်ပြီး ထွက်မလို့….
လက်မထောင်လိုက်တာ 1 လို့ ပေါ်လာပြီး ပြန်ပျောက်သွားတယ်။
ဘာများ မှားနေတယ်မသိ :roll eyes:
Shwe Ei says: ၂ခါနှိပ်ရင် ပေါ်ပါတယ် အန်တီမမရေ။ ကျမလဲ အဲလိုခဏခဏ ဖြစ်လို့ ပြန်ပျောက်သွားတိုင်း နောက်တခါထပ်နှိပ်မှပေါ်ပါတယ်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုသီဟရေ ကျနော်ကိုဖုန်းဆက်ပေးပါအုံး။
manawphyulay says: ဒီလို တောရွာဓလေ့ တောရွာမြင်ကွင်းလေးတွေ မမြင်ရတာ အတော်ကြာပြီ။ ခုလိုသဘာဝရှုခင်းတွေကို မြင်ရတဲ့အတွက်လည်း စိတ်ကိုကြည်နူးမိပါတယ်။
Comments By Postကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - Mon Kit - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - အရီးခင်လတ် -etone``ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - KZအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - Mobile13 - ပန်း စံပါယ်အဟံ ပထမံ - ကြောင်ဝတုတ် - kaiရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - Ma Ei - ဦး ကျောက်ခဲအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - ကြောင်ဝတုတ် - Moe Zလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ - မွေ့ကေသာ - မွေ့ကေသာဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - Mon Kit - အရီးခင်လတ်မြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - ko pauk mandalay - ko pauk mandalayမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ဦး ကျောက်ခဲ - ko pauk mandalayသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - အရီးခင်လတ် - KZကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - Lay Pai - ခင် ခတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ - KZ - ရွှေတိုက်စိုးအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - KZ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးအိပ်မက်မင်းသမီး - KZ - မောင် ပေနားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ဦးဦးပါလေရာရထား ထွက်တော့ မယ် - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - Miss Crystallineမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - kai - ခင် ခသမ္မတကြီး ဦးကြောင် အိမ်သာview - မောင် ပေ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးအမုန်းတွေဝေး အပြုံးတွေပေးမယ့် ဒီည................................ - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ရွှေတိုက်စိုးEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities